ဘဝမှာ မရှိသင့်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက် မခံစားပါနဲ့။
ကိုယ့်ဘဝမှာလုံးဝ မရှိသင့်တဲ့လူမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းလည်း အဲဒီလိူလူမျိုးကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလူတွေဟာ သူစိမ်းမှမဟုတ်ပါဘူး။ မိသားစုထဲမှာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေသူမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်မိလိုက်ရာကနေ တွေးမိသွားတာပါပဲ။ အမုန်းဆုံးလူဆိုတာမရှိဘူးတဲ့။ မပတ်သက်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စာသားလေးကို မှတ်မိနေပါတယ်။ ဘဝမှာမရှိသင့်တဲ့လူဆိုတာလည်း အဲဒီ့သဘောတရားပါပဲ။ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ပေမယ့် အခြေအနေအကြောင်းကြောင့်ပတ်သက်ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းက မရှိသင့်တဲ့လူတွေပါ။
တခါတလေ ဘဝမှာ အဲဒီလို လူတွေက သင့်ကို အာရုံနောက်အောင် အလုပ်နိုင်ဆုံးလူတွေထဲမှာပါပါတယ်။ မရှိသင့်ပေမယ့် ရှိနေတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုအမျိုးမျိုး အာရုံနောက်စေပါတယ်။ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့လူတွေပါပဲ။ မရှိသင့်တာမှန်ပေမယ့် ရှိနေတယ်။ ပြတ်သားစွာ စွန့်လွှတ်ပစ်လိုက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုလူတွေအတွက် အရမ်းအာရုံနောက်လာလို့ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါထိခိုက်လာတဲ့အခါ သင့်ကိုယ်သင်သေချာပြန်တွေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးတစ်စက်မှမပေးတဲ့လူအတွက် ကိုယ်က ပူလောင်နေလို့၊ ခံစားနေလို့ ဘာအကျိုးရှိမှာလဲ။ ဘာတွေတိုးတက်သွားမှာလဲ။ ကိုယ့်အတါက် ဆုတ်ယုတ်မှုသာ တိုးလာမှာပါ။ အဲဒီလိုလူတွေက သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုလည်း ဝေဝါးစေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ဘဝကိုလည်း ဆုတ်ယုတ်စေပါတယ်။ အချိန်ကြာကြာပတ်သက်လေလေ သင့်ဘဝ ဆုတ်ယုတ်လေလေဖြစ်မှာပါ။
အဲဒါကြောင့် အဲဒီလိုလူတွေကို ပြတ်သားစွာထားခဲ့ဖို့ ၊ ခပ်ဝေးဝေးနေဖို့ ကြိုးစားရမှာ နံပါတ်တစ်ပါ။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ်သွားရမှာက နံပါတ်နှစ်ပါ။ သင်က အဲဒီလို သင့်ဘဝမှာ မရှိသင့်ဘဲ ရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးနေလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် သူတို့ကို သင့်စိတ်ထဲကနေသာ block ထားလိုက်ပါ။ သူတို့ဘာလုပ်လုပ်မခံစားဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နေ့တိုင်းသတိပေးပါ။ သင်လုပ်စရာရှိတာကိုသာ တစိုက်မတ်မတ်ဆက်လုပ်သွားဖို့က သင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။
ဘဝမှာ ကြုံလာရတဲ့လူတိုင်းက သင့်ကိုတစ်ခုခုပေးသွားပါတယ်။ ယူတတ်ရင်လည်း သင့်အတွက်တန်ဖိုးရှိတာကို သင်ရသွားပါတယ်။
“Good people give you happiness. Bad people give you experience. Worst people give youalesson. And best people give you memories.”
လူကောင်းတွေက သင့်ကိုပျော်ရွှင်စေတယ်၊ လူဆိုးတွေက သင့်ကိုသင်ခန်းစာပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးလူတွေကတော့ သင့်ကို အမှတ်တရမှတ်ဥာဏ်တွေပေးသွားတာပဲပေါ့။ အဲဒီ့တော့ ကိုယ့်ဘဝမှာမရှိသင့်တဲ့လူတွေရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အကျင့်စရိုက်၊ အပြုအမူလုပ်ရပ်မျိုး ကိုယ်တိုင်က သူများကိုမလုပ်မိအောင် သင်ခန်းစာယူပါ။ မလုပ်မိအောင်ကြိုးစားပါ။ သူတို့ကို သင်မပြုပြင်နိုင်ရင် မပြုပြင်ဘဲ သင့်ကိုယ်သင်သာ ပြုပြင်လိုက်ပါ။ “If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude.” Maya Angelou ရဲ့ မှတ်ချက်လိုပေါ့။ မကြိုက်တဲ့အရာကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ သင်မကြိုက်တဲ့အရာကို ပြောင်းလဲပစ်လို့မရရင် အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်အမြင်အတေါးသင့်ခံယူချက်ကိုသာ ပြောင်းလဲလိုက်ပါတဲ့။ အဲဒီ့သဘောတရားပါပဲ။ သင့်ဘဝမှာ မရှိသင့်တဲ့လူတွေကို ပြတ်သားစွာ စွန့်ခွာပါ။ မစွန့်ခွာနိုင်ရင် သူတို့ဆီက ရတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ သင့်ကိုယ်သင်သာပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ စိတ်ထဲကနေသာ block ထားလိုက်ပါလို့ အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်။ ကျင့်ယူကြည့်လိုက်ပါနော်။ အချိန်တစ်ခုယူရမှာ မှန်ပေမယ့် သင့်အတွက် အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။